बिदाको सपना | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: बिदाको सपना ★ यामदास घायल 'सन्तलाल'★ प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १६, २०७३
लेखक : यामदास घायल 'सन्तलाल' विधा/श्रेणी : कथा रचना संख्या : 1 प्रकाशन मिति : आइतबार, माघ १६, २०७३ वि सं २०४९ सालमा रामेछाप, लखनपुर-4, तिमलडाँड जन्मिएका यामदास घायल 'सन्तलाल' हाल दक्षिण कोरियामा छन । कृतिका रुपमा कुहिरो भित्रबाट (गजल सङ्ग्रह) प्रकाशित गरेका 'सन्तलाल' मझेरी, फोनिजकोरिया तथा अनलाईन रेडियो गोर्खालीसँग आवद्ध छ्न । यामदास घायल 'सन्तलाल'का अरु रचनाहरु प्रत्येक दुईहप्ताको कामपछि तेस्रो हप्ता आरामको लागि समय दिने मेरो कम्पनीले यो पटक पनि नियम अनुसार नै मलाई छुट्टि दिएको थियो। आकासले पनि आफ्ना नाङ्गा शरीर भरी दिनभरि सूर्यलाई नचाएर लागेको थकानलाई मेटाउनका लागि सुस्ताएको थियो मसङ्गै रातको छहारीमा । जसरी म सुस्ताइरहेको थिएँ आफ्ना दिनभरिको पसिनाले भिजेको र कामको दुखाईले थिचेको मेरो शरीरलाई लम्पसार फालेर।
मोबाईलले एक्कासि जोड्जोड्ले चिच्याएर बिहान भएको सङ्केत दियो। मलाई भने मोबाईल चिच्याएकोमा रिस उठ्यो र हत्तपत्त मोबाईलको घाँटी थिचिदिएँ- ‘बिहान भएको थाहा पाउने तर आज बिदा रहेको थाहा नपाउने। त्यसलाई थाहै छ नि बिदाको दिन अबेरसम्म सुत्छु भन्ने कुरा।’ मनमनै भुनभुनाउदै पुन: बिछ्यौनमा आफ्नो शरीरलाई फालिदिएँ।
कच्चिबाटोमा कहिले भित्तामा जोतिदै त कहिले छेउतिर ढल्कदै उकालो लाग्दै थियो बस। कुनै चाडबाडको अवसर पारेर जोड्ले निङ्गार पिई होस गुमाएको बटुवा जस्तै। यात्र गरिरहेकाहरू मध्ये धेरैजसो त आईमाईहरू थिए। धेरैले काखमा आफ्नै अनुहारका सानीबच्ची च्यापेका थिए। अनि छेवैमा उभिएका थिए तिनै अनुहारमा मुसार्दै तिनीहरूकै लोग्नेहरू। बीचरीहरू बसले छेउ र भित्त्तामा पछार्दा डरले चिच्याउथे र गाली गर्थे चालकलाई। बिचरा चालक सरकारलाई दोस लागाउँदै भनेको सुनिन्थ्यो- सरकारले पिच गरिदिए त यतिका जोखिम युक्त यात्र गर्नै पर्थेननी।
तर बस भने हल्लन नछोडी उकालोबाटोमा बल लगाउदै चढ्दै थियो।
आमाले गुन्द्रुक र फापारको रोटि पोको पारेर पठाउनु भएको थियो। पेटले आमाले पठाउनु भएको खाजाको सम्झना दिलाई दिईहाल्यो। सिटमा पनि म एक्लै थिएँ त्यो पनि अन्तिम सिट। त्यसैले सजिलो महसुस गरेँ र झोलाको बाहिरी भागमा रहेको गुन्द्रुक र रोटिलाई निकालेर खाना थालेँ क्वाप्पा क्वाप्पा…… बस भने आफ्नै रफ्तार र हल्लाईमा उकालो चढ्दै थियो।
साँझ पर्दै थियो भने म लम्क्दै थिएँ। बसमा सङ्गै यात्र गर्नेमा कोही पनि चिनेकाहरू थिएनन्। चिनून् पनि कसरी? म कहाको मान्छे, अनि तिनीहरू कहाका? म साथीले बोलाएको कारण साथीको बिहेमा जाँदै थिएँ। नौलो ठाउँ नौलो मान्छे। मैले साथीलाई सबै जानकारी दिएर फोन गरेको थिएँ। साथीले सबैजना ब्यस्ता भएकोले गाउँकै अरु दुई भाइहरूलाई लिन पठाएकोले बिस्तारै सडकै सडक हिन्दै आऊ भनेकोले म अलिमाथिसम्म जाँदै थिएँ।
लगभग 1 घन्टा पछि एउटा सुबिधा युक्ता बङ्गलामा आइ पुग्यौँ। अच्चमा लाग्यो। यत्रो जङगलको माझ यस्तो बिकट ठाउँ तर यत्रो महल कसरी? छक्क परेँ म। पत्याउन गाह्रो थियो तर पनि नपत्याई धर थिएन किनकि आफू तिनै बङ्गलाको मुलद्वारमा उभिएको थिएँ। भित्र पस्न अनुरोध गरिन्। भित्र गएँ। अच्चमा सुननै सुनले पोतिएका भित्ता थियो। कोठाहरू कति सुगन्धित सबैबाट विभिन्न जातका फुलहरूका बासना आउथ्यो। म त छक्क परेँ। आफैले आफैलाई विश्वास गर्न सकिन तर पनि म त्यही उभिएको थिएँ। मैले उनीलाई हेरेँ तर उनी त्यहाँ थिइन्। अघि सङ्गै उभिएकी युवती आफूसङ्गै नपाँउदा छक्क परेँ। तैपनि अँझै भित्र गएँ उनी त मभन्दा अगाडि नै भित्र गइसकेकिरहेछे झन मलाई अच्चम तुल्यायो। उनी भित्र टेबलै भरी खाने कुरा राखेर पर्खिरहेकिरहेछिन्। गएँ र टेबलमा बसेर खाना थालेँ। त्यही बेला उनीले आफ्नो जानकारी दिई।
म तिम्रै साथीको गाउँकै मैचा हुँ। नेवारीकि छोरी। म यहाँ बस्ना थालेको आजैबाट हो। योभन्दा अघि म तिम्रो साथीकै गाउँमा बस्थेँ। त्यहाँ बस्दा हिजोमात्र मेरो लोग्नेको बिदेशबाट लास आयो। उनैको मेहनतले यो अनकान्टार ठाउँमा मैले यो महल ठाडाएको थिएँ।………………………
उनीले सुत्नको लागि बिछ्याउन देखाई। सुनै सुनले सजिएको बिछ्याउन थियो। सबैबाट विभिन्न थरिको सुभास आउथ्यो। बिस्तारै बिछ्यौनामा पल्टिएँ। तर बिछ्यौनमा पल्टने बितिकै म एक्कासि हावामा फिलिङ्गिदै आकासबाट बादलहुँदै तल खसेँ। तब पो एक्कासि ब्यूँझिएँ र जुरुक्कै उठेछु। आफ्नै अगाडिको भित्तामा टाँसेको ऎनाले मलाई मेरै भखरै उठेको अँध्यारो मुहार देखाइरहेको थियो।
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : कथा: छोरीको जिन्दगी कथा – मायाको परिभाषा पश्चाताप कथा – चिया दिने केटी कथा – धुवाँ भाउजु कथा : मालती घाइते विपना नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com